भेरी जत्तिकै लामो ईतिहाँस बोकेको जात व्यावस्थाको अन्त्य कहिले ?
गत तीन हप्ता देखि यता नेपालको नयाँ नक्साको पुनर्जन्मको नाटकिय उत्सवलाई ओझेल पार्दै मान्छेहरु रुकुम र जाँजरकोटको समाजको अन्तरबिरोधहरुलाई ठिक ढंगले व्यावस्थापन गर्न नसकेको आरोप भेरी नदीलाई लाईरहेका छन् । जसले अन्तरजातिय प्रेम विवाहलाई स्वीकार गर्न...बाँकी
कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेसँगै श्रमबजारमा लाखौं रोजगारी गुमेको छ। करोडौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ। आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकमा महामारीले श्रमबजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने इंगित गर्दै विश्वको आधा श्रमशक्ति (१.६ बिलियन) को जीविका जोखिममा पर्न...बाँकी
Posted by हिमाली संचार डटकम | विचार, समाज
घर बलियो हुनलाई घरको जग बलियो हुन जरूरी छ। अझै घर कति तलासम्म उठ्ने हो, सोही मोताबिक इन्जियरहरूले घरका नक्सा बनाउँछन्। र तलानुसारका घरका जग बलियो बनाउने रायसल्लाह र जगको नक्सा तयार पारिदिन्छन्। ताकि घर...बाँकी
राष्ट्रियताको प्रश्न राज्य र नागरिकको मुलभूत पक्ष हो। विश्वमा राज्यहरुको उत्पति भएपछि राष्ट्रियताको अवधारणा जन्म भएको हो। यो राज्यको भूगोल, जनसङ्ख्या, सभ्यता र अस्तित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छ। राज्यमा बसोबास गर्ने आम नागरिक समग्रतामा राष्ट्र हो र...बाँकी
जीवनमा प्राप्त गर्ने धेरै कुराहरुले सन्तुष्टि दिदैनन् र सन्तुष्टिले प्राप्त गर्ने धेरै कुराहरु खोजेर पाईदैनन् ती हजारौमा एक मात्र भेटिन्छन् । हो, मेरा लागि त्यही एक सन्तुष्टि हो उपन्यास ‘मैदारो’ उपन्यासकार भुपिन खड्का प्रति गहिरो...बाँकी
छुवाछुत कहिलेसम्म ?
एउटा प्रश्नले मन सधै‌ अमिलो भइरहन्छ। आङ सिरिङ्ग हुन्छ। छुवाछुत कहिलेसम्म ? समय फेरियो, मान्छेहरु पनि नयाँ र आधुनिक भए, कानुन पनि आयो तर छुवाछुत हटेन। छुवाछुतमुक्त गर्ने भाषण मञ्चमा गर्छ मान्छे, फेरि आमा र...बाँकी
सामन्तवाद नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा उत्पत्ति र विकास भएको हो । उद्द्भव, विकास, विकास उत्सर्ग तथा पतनपछि विभिन्न चरण पूरा भएपछि आधुनिक नेपालको स्थापनापछि नयाँ चरणको सामन्तवादको विकासक्रम रोकिन पुग्यो। विश्वका विभिन्न राज्यहरुमा...बाँकी
अजित मिजार मारेउ, शिवशंकर दास मारेउ, संगीता परियार मारेउ, अस्मिता तोलांगी मारेउ र आज टिकाराम सुनार र नवराज विश्वकर्माहरु मारेउ। पीडितहरु झिनो स्वरमा मात्र बोलिरहेका छन्। उनीहरुको पीडा अनि आवाज कसैले पनि सुनेनन्, सुन्नेहरुले उडाए।...बाँकी
शहरको मोह सच्चिकै घटेकै रहेछ !
मैले यो शहरमा बसेको धेरै दशक त भएको छैन। मैले यो शहरमा गाउ धरको जस्तो मिलनसार समाज पनि पाएको छैन। रुना, चन्दु र तीन दोभान संग दाजेर हेर्ने ठाउको त कुरै भएन। विक्रम सम्बत् १९९०...बाँकी
नेपाली भूमि नक्सामा मात्र हैन, अधिकारमा चाहिन्छ !
छिमेकी मुलुक भारत सित रहेको सिमा विवाद करिब ६ दशक लामो यो विषयले अझै निकास पाएको छैन। सन् १८१६ सालमा भएको सुगौली सन्धि नै आजको सिमा विवादको जड मानिन्छ । यस सन्धिको कारण नै नेपालले...बाँकी